သမားတျောကွီး ဇီဝက ဆိုတာ - Thutazone
သမားတျောကွီး ဇီဝက ဆိုတာ
My world Phyo Phyo ဘလော့မှ
မမေခေငျမသေဈက သမီးဖွဈသူ ဖွိုးဖွိုးကိုပွောပွတဲ့ အနနေဲ့ ရေးထားတာပါ။
ဘုရားရှငျ လကျထကျက သမားတျောဇီဝက ဆိုတာ ရှိတယျ သမီးရဲ့။ သမီဖှားဖှားက မမေတေျောတျောကွီးတဲ့အထိ (၁၃နှဈ ၁၄နှဈ ထိ) နလေ့ညျနခေ့ငျး သားအမိ အားလပျတဲ့အခါ ပွောပွတတျတယျ။ ခု သူ့အကွောငျး အကဉျြးခြုံးပွောပွခငျြတယျ။ ဘုရားရှငျ့လကျထကျတျောကတညျးက ခှဲစိတျခြုပျလုပျတဲ့ အတတျပညာ ရှိခဲ့ကွောငျးသိထားရအောငျလို့..။
ရာဇဂွီုလျပွညျ ဗိမ်ဗိသာရ မငျးကွီးလကျထကျမှာ သာလဝတီဆိုတဲ့ အမြိုးကောငျးသမီးတယောကျကို ကခွသေညျအရာထားလို့ မငျးမူးမတျမြား တဈညကို အသပွာတဈထောငျပေးပွီး ပြျောပါးကွတဲ့အထဲမှာ သားတျော အဘယမငျးသားလဲ ပါဝငျနတေယျ။ (အဇာတသတျက တဈယောကျ) တဈနတေ့ော့ သာလဝတီမှာ အဘယမငျးသားရဲ့ သန်ဓေ စှဲကပျတညျရှိနတေဲ့အတှကျ ကခွသေညျမဟာ မကနျြးမာဟနျဆောငျပွီးအခနျးအောငျးနတေယျကှဲ့။
ဆယျလပွညျ့တဲ့အခါ တငျ့တယျလှပတဲ့ သားယောကျြားလေးကို မှေးဖှားပမေဲ့ မရှိအပျလို့ ယူဆပွီး သားကို ကြှနျမ တို့အား စှနျ့ ပဈစပေါတယျ။ကြှနျမတှကေ လူသှားလမျးတခုက အမှိုကျပုံမှာ အလှယျတကူ စှနျ့ပဈလိုကျသတဲ့။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျဘဲ အဘယမငျးသားကလဲ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ အဲဒီ အမှိုကျပုံနားရောကျရှိလာပွီး ကြီးငှကျတို့ ဝိုငျးအုံထိုးဆိတျနတေဲ့ အထုပျတခုကို စိတျဝငျတစား ကွညျ့ရှု မိပါရော။ မှေးကငျးစ ကလေးသူငယျမှနျး သိတော့ (ငါနှငျ့ ထိုကျလို့ ရပသေညျ )လို့ နှဈလုံးမူကာ သိမျးပိုကျ မှေးမွူထားတယျ။ “အသကျရှိသေးရဲ့လား” လို့ အဘယမငျးသားရဲ့ အမေးစကားကွောငျ့ အမြားက ကလေးနာမညျကို “ဇီဝက”လုိ့ဘဲ လှယျလှယျ ချေါလိုကျကွတော့တယျ တဲ့။
အရှယျရောကျလာတဲ့အခါ အဘယမငျးသားကို “ခမညျးတျော သားရဲ့ မိခငျ အဘယျသူဖွဈသနညျး” လို့ မေးတော့တာပေါ့။ အဘယမငျးသားကလဲ မကှယျမဝှကျ “ဇီဝက သငျ့မိခငျကို ငါမသိ အမှိုကျပုံတှငျ ကြီးငှကျတို့ ဝိုငျးအုံသဖွငျ့ ငါ ကောကျယူ မှေးမွူထားခွငျးဖွဈသညျ” လို့ အမှနျအတိုငျး ဖှငျ့ပွောလိုကျတယျ။ ဒါနဲ့ပဲ ငါ့မှာ တှယျတာစရာမိခငျဘခငျ မရှိ ငါ့ကိုယျငါ အားကိုးရမညျ။ ပညာရှာရမညျ လို့ တှေးတောပွီး ဘယျလိုပညာမြိုးကို သငျယူမလဲ အလေးအနကျထား စဉျးစားလိုကျတော့ ဆေးပညာမှတဈပါး သူ့အကြိုး ကိုယျ့အကြိုး ရှိစမေညျ့ အခွားသော ပညာရေးကို မမွငျ လို့ ဆုံးဖွတျပွီး တက်ကသိုလျပွညျကို ဦးတညျ ထှကျခှာခဲ့တယျ။
ဒီသာပါမောက်ခဆရာ့ထံမှာ ကောငျးစှာပညာသငျကွားပွီး ၇နှဈရှိတဲ့အခါ
“ဆရာ ဆေးအတတျပညာ ပွီးဆုံးပါပွီလား “ မေးတယျ။ ဆရာက တူရှငျးတဈခြောငျးပေးပွီး“အခငျြး ဇီဝက ဤတူရှငျးကို ယူ၍ အရပျလေးမကျြနှာမှာ ဆေးဘကျမဝငျသညျ့ အပငျကို တူးယူးခဲ့ “ခိုငျးစသေတဲ့။
ဇီဝကလညျး လေးရကျတိုငျတိုငျ ရှာပမေဲ့ ဘယျမှာမှ ဆေးဘကျမဝငျတဲ့အပငျ ရှာမရ သူ့နရောနဲ့သူ အသုံးဝငျနတောမိုို့ “ဆရာ မတှပေ့ါ” လို့ လြှောကျသတဲ့။
“ကောငျးပွီ။ ဇီဝက အသငျ ပညာစုံပွီးဖွဈ၍ ဆေးကုသခှငျ့ ငါပေးပွီ။ ပွနျလိုက ပွနျလော့” လို့ ဆိုတယျ။
ဒါနဲ့ ဆေးတက်ကသိုလျက ကြောငျးဆငျးလာတဲ့ ဆေးသမားလေး ဆရာ ဇီဝကဟာ သာကတေပွညျရောကျတော့ ဦးစှာ ဆေးကုဖို့ လူနာတယောကျ ရရှိလိုကျတယျ။ သာကတေပွညျသူဋ်ဌေးကွီးကတျောရဲ့ ဦးယဉျးခေါငျးခဲနာ ကို ထောပတျမှာ ဆေးမြား ပေါငျးထညျ့ စပျယူပွီး နှာနှပျ ပေးပါသတဲ့။ ၇နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ခေါငျးကိုကျ ရောဂါဟာမမနျးရ မမှုတျရဘဲ တခဏခငျြးပြောကျကငျးခမျြးသာသှားပါသတဲ့ကှယျ။ ဒီတော့ အသာပွာလေးသိနျး ဆေးဖိုးရပါတယျ။
ဇီဝကဟာ ရလာတဲ့ဆေးဖိုးဝါးခ လေးသိနျးကို ရာဇဂွိုလျပွညျရောကျတဲ့အခါ အဘယမငျးသားထံခစားပွီး “တကွိမျသာ ဆေးကုရသေးသညျ့ လာဘျဦးကို ကြှနျုပျအားမှေးမွူသော ကြေူဇူးရှိသညျဖွဈ၍ သိမျးတျောမူပါ” လို့ အပျသတဲ့။ အဘယမငျးသားက မသိမျးပါဘူး။
“သငျရသော ဥစ်စာသညျ သငျ့ အဖို့သာ ဖွဈပါစေ” လို့ ငွငျးပယျလိုကျတယျ။
‘ဒီ့နောကျ ဗိမ်ဗိသာရမငျးကွီးရဲ့ မွငျးသရိုကျနာကို ကုပါတယျ။ လကျသညျးထိပျမှာ ပါလာတဲ့ ဆေး မြှလောကျနဲ့ မငျးကွီးရဲ့အနာ အရှငျးပြောကျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မငျးကွီးက ကြေးဇူးတငျလှနျးလို့ ဥစ်စာငှကွေေး ပေးသျောလညျး အဘိုးအဘှား ဥစ်စာကို မယူကောငျး မယူထိုကျပါလို့ ငွငျးပယျလိုကျတယျ။ အဲဒီနောကျ ရာဇဂွိုလျ သူဋ်ဌေးကွီးရဲ့ ခေါငျးကိုကျနာကိုတော့ အိပျယာမှာ ပကျလကျသိပျပွီး နှာ ၏ အာနုဘျောနှငျ့ အိပျပြျောစသေတဲ့။ မဆေ့ေးသဘောပါ။ ပွီးရငျ ဦးရကေို ဓါးနဲ့ ခွဈလှာပွီး ဦးနှောကျဖေါကျစားနတေဲ့ ပိုးနှဈကောငျကို ဖယျရှားပါတယျ။ ပွီးရငျ ဦးရကေို ပွနျစပေိ့တျပွီး ဆေးလူးပါတယျ။ ၂၁ရကျအကွာမှာ အကောငျးပကတိ ဖွဈသှားပါသတဲ့။ ရရှိလာတဲ့ အသပွာ နှဈသိနျးထဲက တဝကျကို မငျးကွီးအား ပေးအပျပါသတဲ့။
နောကျတဈယောကျက ဗာရာဏသီသူဋ်ဌေးသားတဈယာကျ ခလေးတို့ ဘာဝဦးခေါငျးဇောကျထိုး ဆော့ကစားရာမှာ အူထုံးသှားလို့ ဗိုကျကိုခှဲ ပွီး ထုံးနတေဲ့ အူကို ဖွပေေးပါသတဲ့။ ပွီးမှ နရောမှနျ ပွနျထားပွီး ခှဲထားတဲ့ ဗိုကျကိုပွနျခြုပျပါတယျ။ ဆေးလိမျးကွံထားပေးပွီးတာနဲ့ ၂ရကျအကွာမှာဘဲ အကောငျးပကတိ ဖွဈသှားပါတယျ။ နောကျထပျ သမီးအဖှားပွောတာက နားရောဂါ ဝဒေနာ ကို နှဈခြီ ခံစားနရေတဲ့ သူဋ်ဌေးမတယောကျရဲ့ နားထဲက ပိုးကောငျကို ဗုံသံတဈမြိုးပေးပွီး ခြော့မွှူ ချေါထုတျတာနဲ့ ပြောကျကငျးသှားတယျ လို့ ဆိုတယျ။
နောကျ စမ်ပာနဂိုရျပွညျက စန်ဒပဇ်ဇောတမငျးရဲ့ ရောဂါကိုတော့ ထောပတျနံ့ မရအောငျ အနံ့ဖြောကျပွီး ဆေးပေါငျးစုံ ပွှမျးနှောလို့ တိုကျကွှေးရ တယျ။ ဒီမငျးက အစောကတဲက ထောပတျနံ့ မခံနိုငျဘူးပွောထားတာမို့ သူကလဲ ထောပတျမပါဘဲ ဆေးစီရငျလို့ မရတာကွောငျ့ ဆေးတိုကျပွီးရငျ ပွေးဖို့ အဆငျသငျ့ပွငျထားတာလေ။ ဇီဝကတို့ ဉာဏျသှားပုံမြား။ မငျးဆိုတာ စိတျမထငျရငျ သတျမှာကိုး။ ဆေးသောကျထားတဲ့သူက လကွေို့ထိုးတဲ့အခါ ထောပတျ့ နံ့ ထှကျပါလရေော ဇီဝကကို သတျစေ မိနျ့တာဘဲလေ။
အစကတညျးက ဇီဝက က ဘုရငျ့ထံ မွို့တံခါးတှကေို ဇီဝကလာရငျ ဖှငျ့ထားပေးဖို့ ကွို ခှငျ့ တောငျးထားတာကှဲ့။ ဘာရမလဲ။ ဇီဝက က ဘဒ်ဒဝတီဆငျမကိုစီး ပွေးလိုကျတာ တဈခါတညျး ရာဇဂွိုလျရောကျရောဘဲတဲ့။ ရောဂါ ရှငျးရှငျးပြောကျသှားတဲ့အခါ သိဝိတိုငျးဖွဈ အသပွာ တသိနျးထိုကျတဲ့ ပုဆိုးကို ကံတော့ပါသတဲ့။ ရှငျဘုရငျတှမှေ ဝတျရတဲ့ပုဆိုးလေ။ ကြေးဇူးသိတတျတဲ့ ဇီဝကဟာ ဘိုးတျော ဗိမ်ဗိသာရမငျးကွီးကို မငျးနဲ့ထိုကျသညျလို့ တသိနျးတနျပုဆိုးကို ကံတော့လိုကျပါသတဲ့။
ဇီဝက ဟာ မိခငျဖခငျ ဘယျသူဘယျဝါဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အားမငယျတတျဘူး။ ကိုယျစှမျးကိုယျစနဲ့ ရပျတညျနိုငျအောငျ ကွိုးစားတာမြား တကယျ အတုယူဖို့ပါဘဲ။ သူ ဆေးပညာသငျမယျလို့ လာတော့ ငှကွေေးဥစ်စာတပွားတဈခပျြမှ ပါလာတာမဟုတျဘူးကှဲ့. အဘယမငျးသားကိုတောငျ ဘခငျ မဟုတျတာသိရော မပွောမဆို ထှကျခသြှားတာ။ ဆေးပညာသငျပေးတဲ့ ဆရာ့အိမျမှာ ဝယြောဝိစ်စအားလုံး မငွီးမငွူ လုပျပေးတာကိုး။ ဆရာကလညျး ခဈြတော့ ဆရာစားမခနျြ အကုနျသငျပေးတယျတဲ့။
ဇီဝကဟာ နောငျအခါ ဘုရားရှငျရဲ့သမားတျောလညျး ဖွဈခဲ့တာပါ။ ဘုရားရှငျ ကိုယျတျောတိုငျ မကနျြးမမာ ဖွဈရငျ ဇီဝကသာ ကုသရပါတယျ။ (ဘုရားဘဲ နမေကောငျးမဖွဈနိုငျဘူးလို့ မထငျလနေဲ့။) ဘုရားက ဟောထားတယျလေ။ ငါဘုရား၏ ခန်ဓာကိုယျသညျ ရေ မွလေေ မီး ဓါတျကွီးလေးပါး အစုအဝေးသာဖွဈသညျ့လူသားစငျစဈတညျး တဲ့ သှေးလဖေေါကျပွနျရငျ ကိုယျလကျမအီသာတာ ဘာညာ ဖွဈမှာဘဲလို့ ဆိုလိုတာ။ ဘုရားရှငျ ဝမျးတျောလားတဲ့အခါ ဝမျးခြုပျတျောမူတဲ့အခါ စသညျတို့မှာ သမားတျော ဇီဝက သာ ကုစားရပါတယျ။
ဒဝေဒတျ က တောငျစောငျးကနေ ကြောကျမောငျးဆငျ လှိမျ့ခတြုံးက ခွမေတျော ထိခိုကျပါတယျ။ ဇီဝက ကုသရပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာ သမားတျော ဇီဝက ရယျလို့ ရာဇဂွိုလျ ဝသောလီ သာဝတ်ထိ စသညျ ဘုရားရှငျ သကျတျောထငျရှား ရှိခဲ့ ကာလ တလြှောကျလုံး ရှမျးရှမျးတောကျ နာမညျကွီးခဲ့တာလုိ့ ဆိုရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဇာတသတျမငျးသားကို ဘုရားရှငျ့ကြောငျးတျောကို သှားတရားနာဖို့ လမျးညှနျခဲ့တာလဲ သမားတျော ဆရာ ဇီဝက ဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆရာဇီဝကရဲ့ အကွံဉာဏျကိုယူလို့ အဇာတသတျမငျးဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတဦး ဖွဈမွောကျခဲ့ပါတယျ။
ဘုရားရှငျက အမွတျဆုံး အနနေဲ့ ဧတဒဂျဘှဲ့တံဆိပျတှပေေးတဲ့အထဲမှာ ဇီဝကလညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ‘ပုဂ်ဂလ ပသန်န’ ဧတဒဂျ ဘှဲ့ကို ရခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ (ပုဂ်ဂိုလျကို ကွညျညိုတတျသောအရာ၌ ဘှဲ့တံဆိပျရလသေညျ၊ သီလ သမာဓိ ပညာစသော ဂုဏျကြေးဇူး အထူးရှိသောရဟနျးကို ဂုဏျကြေးဇူးအလြောကျ အထူးတလညျ ကွညျညိုမွတျနိုးတတျသောကွောငျ့ ‘ပုဂ်ဂလ ပသန်န’ ဘှဲ့တံဆိပျရသညျဟူ၏။) လူသားတို့၏ အကြိုးစညျးပှားကို ဆောငျရငျး နောကျဆုံးမှာတော့ ဆရာဇီဝက ဟာ နိဗ်ဗာနျဝငျ စံပြျောသှားခဲ့ပါတယျ သမီးရေ..။
သမားတော်ကြီး ဇီဝက ဆိုတာ
My world Phyo Phyo ဘလော့မှ
မေမေခင်မေသစ်က သမီးဖြစ်သူ ဖြိုးဖြိုးကိုပြောပြတဲ့ အနေနဲ့ ရေးထားတာပါ။
ဘုရားရှင် လက်ထက်က သမားတော်ဇီဝက ဆိုတာ ရှိတယ် သမီးရဲ့။ သမီဖွားဖွားက မေမေတော်တော်ကြီးတဲ့အထိ (၁၃နှစ် ၁၄နှစ် ထိ) နေ့လည်နေ့ခင်း သားအမိ အားလပ်တဲ့အခါ ပြောပြတတ်တယ်။ ခု သူ့အကြောင်း အကျဉ်းချုံးပြောပြချင်တယ်။ ဘုရားရှင့်လက်ထက်တော်ကတည်းက ခွဲစိတ်ချုပ်လုပ်တဲ့ အတတ်ပညာ ရှိခဲ့ကြောင်းသိထားရအောင်လို့..။
ရာဇဂြီုလ်ပြည် ဗိမ္ဗိသာရ မင်းကြီးလက်ထက်မှာ သာလဝတီဆိုတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ကို ကခြေသည်အရာထားလို့ မင်းမူးမတ်များ တစ်ညကို အသပြာတစ်ထောင်ပေးပြီး ပျော်ပါးကြတဲ့အထဲမှာ သားတော် အဘယမင်းသားလဲ ပါဝင်နေတယ်။ (အဇာတသတ်က တစ်ယောက်) တစ်နေ့တော့ သာလဝတီမှာ အဘယမင်းသားရဲ့ သန္ဓေ စွဲကပ်တည်ရှိနေတဲ့အတွက် ကခြေသည်မဟာ မကျန်းမာဟန်ဆောင်ပြီးအခန်းအောင်းနေတယ်ကွဲ့။
ဆယ်လပြည့်တဲ့အခါ တင့်တယ်လှပတဲ့ သားယောက်ျားလေးကို မွေးဖွားပေမဲ့ မရှိအပ်လို့ ယူဆပြီး သားကို ကျွန်မ တို့အား စွန့် ပစ်စေပါတယ်။ကျွန်မတွေက လူသွားလမ်းတခုက အမှိုက်ပုံမှာ အလွယ်တကူ စွန့်ပစ်လိုက်သတဲ့။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘဲ အဘယမင်းသားကလဲ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အဲဒီ အမှိုက်ပုံနားရောက်ရှိလာပြီး ကျီးငှက်တို့ ဝိုင်းအုံထိုးဆိတ်နေတဲ့ အထုပ်တခုကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှု မိပါရော။ မွေးကင်းစ ကလေးသူငယ်မှန်း သိတော့ (ငါနှင့် ထိုက်လို့ ရပေသည် )လို့ နှစ်လုံးမူကာ သိမ်းပိုက် မွေးမြူထားတယ်။ “အသက်ရှိသေးရဲ့လား” လို့ အဘယမင်းသားရဲ့ အမေးစကားကြောင့် အများက ကလေးနာမည်ကို “ဇီဝက”လုိ့ဘဲ လွယ်လွယ် ခေါ်လိုက်ကြတော့တယ် တဲ့။
အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ အဘယမင်းသားကို “ခမည်းတော် သားရဲ့ မိခင် အဘယ်သူဖြစ်သနည်း” လို့ မေးတော့တာပေါ့။ အဘယမင်းသားကလဲ မကွယ်မဝှက် “ဇီဝက သင့်မိခင်ကို ငါမသိ အမှိုက်ပုံတွင် ကျီးငှက်တို့ ဝိုင်းအုံသဖြင့် ငါ ကောက်ယူ မွေးမြူထားခြင်းဖြစ်သည်” လို့ အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ငါ့မှာ တွယ်တာစရာမိခင်ဘခင် မရှိ ငါ့ကိုယ်ငါ အားကိုးရမည်။ ပညာရှာရမည် လို့ တွေးတောပြီး ဘယ်လိုပညာမျိုးကို သင်ယူမလဲ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားလိုက်တော့ ဆေးပညာမှတစ်ပါး သူ့အကျိုး ကိုယ့်အကျိုး ရှိစေမည့် အခြားသော ပညာရေးကို မမြင် လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တက္ကသိုလ်ပြည်ကို ဦးတည် ထွက်ခွာခဲ့တယ်။
ဒီသာပါမောက္ခဆရာ့ထံမှာ ကောင်းစွာပညာသင်ကြားပြီး ၇နှစ်ရှိတဲ့အခါ
“ဆရာ ဆေးအတတ်ပညာ ပြီးဆုံးပါပြီလား “ မေးတယ်။ ဆရာက တူရွင်းတစ်ချောင်းပေးပြီး“အချင်း ဇီဝက ဤတူရွင်းကို ယူ၍ အရပ်လေးမျက်နှာမှာ ဆေးဘက်မဝင်သည့် အပင်ကို တူးယူးခဲ့ “ခိုင်းစေသတဲ့။
ဇီဝကလည်း လေးရက်တိုင်တိုင် ရှာပေမဲ့ ဘယ်မှာမှ ဆေးဘက်မဝင်တဲ့အပင် ရှာမရ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးဝင်နေတာမိုို့ “ဆရာ မတွေ့ပါ” လို့ လျှောက်သတဲ့။
“ကောင်းပြီ။ ဇီဝက အသင် ပညာစုံပြီးဖြစ်၍ ဆေးကုသခွင့် ငါပေးပြီ။ ပြန်လိုက ပြန်လော့” လို့ ဆိုတယ်။
ဒါနဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်က ကျောင်းဆင်းလာတဲ့ ဆေးသမားလေး ဆရာ ဇီဝကဟာ သာကေတပြည်ရောက်တော့ ဦးစွာ ဆေးကုဖို့ လူနာတယောက် ရရှိလိုက်တယ်။ သာကေတပြည်သူဋ္ဌေးကြီးကတော်ရဲ့ ဦးယဉ်းခေါင်းခဲနာ ကို ထောပတ်မှာ ဆေးများ ပေါင်းထည့် စပ်ယူပြီး နှာနှပ် ပေးပါသတဲ့။ ၇နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက် ရောဂါဟာမမန်းရ မမှုတ်ရဘဲ တခဏချင်းပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားပါသတဲ့ကွယ်။ ဒီတော့ အသာပြာလေးသိန်း ဆေးဖိုးရပါတယ်။
ဇီဝကဟာ ရလာတဲ့ဆေးဖိုးဝါးခ လေးသိန်းကို ရာဇဂြိုလ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါ အဘယမင်းသားထံခစားပြီး “တကြိမ်သာ ဆေးကုရသေးသည့် လာဘ်ဦးကို ကျွန်ုပ်အားမွေးမြူသော ကျေူဇူးရှိသည်ဖြစ်၍ သိမ်းတော်မူပါ” လို့ အပ်သတဲ့။ အဘယမင်းသားက မသိမ်းပါဘူး။
“သင်ရသော ဥစ္စာသည် သင့် အဖို့သာ ဖြစ်ပါစေ” လို့ ငြင်းပယ်လိုက်တယ်။
‘ဒီ့နောက် ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးရဲ့ မြင်းသရိုက်နာကို ကုပါတယ်။ လက်သည်းထိပ်မှာ ပါလာတဲ့ ဆေး မျှလောက်နဲ့ မင်းကြီးရဲ့အနာ အရှင်းပျောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်းကြီးက ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ဥစ္စာငွေကြေး ပေးသော်လည်း အဘိုးအဘွား ဥစ္စာကို မယူကောင်း မယူထိုက်ပါလို့ ငြင်းပယ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် ရာဇဂြိုလ် သူဋ္ဌေးကြီးရဲ့ ခေါင်းကိုက်နာကိုတော့ အိပ်ယာမှာ ပက်လက်သိပ်ပြီး နှာ ၏ အာနုဘော်နှင့် အိပ်ပျော်စေသတဲ့။ မေ့ဆေးသဘောပါ။ ပြီးရင် ဦးရေကို ဓါးနဲ့ ခြစ်လွှာပြီး ဦးနှောက်ဖေါက်စားနေတဲ့ ပိုးနှစ်ကောင်ကို ဖယ်ရှားပါတယ်။ ပြီးရင် ဦးရေကို ပြန်စေ့ပိတ်ပြီး ဆေးလူးပါတယ်။ ၂၁ရက်အကြာမှာ အကောင်းပကတိ ဖြစ်သွားပါသတဲ့။ ရရှိလာတဲ့ အသပြာ နှစ်သိန်းထဲက တဝက်ကို မင်းကြီးအား ပေးအပ်ပါသတဲ့။
နောက်တစ်ယောက်က ဗာရာဏသီသူဋ္ဌေးသားတစ်ယာက် ခလေးတို့ ဘာဝဦးခေါင်းဇောက်ထိုး ဆော့ကစားရာမှာ အူထုံးသွားလို့ ဗိုက်ကိုခွဲ ပြီး ထုံးနေတဲ့ အူကို ဖြေပေးပါသတဲ့။ ပြီးမှ နေရာမှန် ပြန်ထားပြီး ခွဲထားတဲ့ ဗိုက်ကိုပြန်ချုပ်ပါတယ်။ ဆေးလိမ်းကြံထားပေးပြီးတာနဲ့ ၂ရက်အကြာမှာဘဲ အကောင်းပကတိ ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ် သမီးအဖွားပြောတာက နားရောဂါ ဝေဒနာ ကို နှစ်ချီ ခံစားနေရတဲ့ သူဋ္ဌေးမတယောက်ရဲ့ နားထဲက ပိုးကောင်ကို ဗုံသံတစ်မျိုးပေးပြီး ချော့မြှူ ခေါ်ထုတ်တာနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားတယ် လို့ ဆိုတယ်။
နောက် စမ္ပာနဂိုရ်ပြည်က စန္ဒပဇ္ဇောတမင်းရဲ့ ရောဂါကိုတော့ ထောပတ်နံ့ မရအောင် အနံ့ဖျောက်ပြီး ဆေးပေါင်းစုံ ပြွမ်းနှောလို့ တိုက်ကြွေးရ တယ်။ ဒီမင်းက အစောကတဲက ထောပတ်နံ့ မခံနိုင်ဘူးပြောထားတာမို့ သူကလဲ ထောပတ်မပါဘဲ ဆေးစီရင်လို့ မရတာကြောင့် ဆေးတိုက်ပြီးရင် ပြေးဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားတာလေ။ ဇီဝကတို့ ဉာဏ်သွားပုံများ။ မင်းဆိုတာ စိတ်မထင်ရင် သတ်မှာကိုး။ ဆေးသောက်ထားတဲ့သူက လေကြို့ထိုးတဲ့အခါ ထောပတ့် နံ့ ထွက်ပါလေရော ဇီဝကကို သတ်စေ မိန့်တာဘဲလေ။
အစကတည်းက ဇီဝက က ဘုရင့်ထံ မြို့တံခါးတွေကို ဇီဝကလာရင် ဖွင့်ထားပေးဖို့ ကြို ခွင့် တောင်းထားတာကွဲ့။ ဘာရမလဲ။ ဇီဝက က ဘဒ္ဒဝတီဆင်မကိုစီး ပြေးလိုက်တာ တစ်ခါတည်း ရာဇဂြိုလ်ရောက်ရောဘဲတဲ့။ ရောဂါ ရှင်းရှင်းပျောက်သွားတဲ့အခါ သိဝိတိုင်းဖြစ် အသပြာ တသိန်းထိုက်တဲ့ ပုဆိုးကို ကံတော့ပါသတဲ့။ ရှင်ဘုရင်တွေမှ ဝတ်ရတဲ့ပုဆိုးလေ။ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ ဇီဝကဟာ ဘိုးတော် ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးကို မင်းနဲ့ထိုက်သည်လို့ တသိန်းတန်ပုဆိုးကို ကံတော့လိုက်ပါသတဲ့။
ဇီဝက ဟာ မိခင်ဖခင် ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အားမငယ်တတ်ဘူး။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာများ တကယ် အတုယူဖို့ပါဘဲ။ သူ ဆေးပညာသင်မယ်လို့ လာတော့ ငွေကြေးဥစ္စာတပြားတစ်ချပ်မှ ပါလာတာမဟုတ်ဘူးကွဲ့. အဘယမင်းသားကိုတောင် ဘခင် မဟုတ်တာသိရော မပြောမဆို ထွက်ချသွားတာ။ ဆေးပညာသင်ပေးတဲ့ ဆရာ့အိမ်မှာ ဝေယျာဝိစ္စအားလုံး မငြီးမငြူ လုပ်ပေးတာကိုး။ ဆရာကလည်း ချစ်တော့ ဆရာစားမချန် အကုန်သင်ပေးတယ်တဲ့။
ဇီဝကဟာ နောင်အခါ ဘုရားရှင်ရဲ့သမားတော်လည်း ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် မကျန်းမမာ ဖြစ်ရင် ဇီဝကသာ ကုသရပါတယ်။ (ဘုရားဘဲ နေမကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မထင်လေနဲ့။) ဘုရားက ဟောထားတယ်လေ။ ငါဘုရား၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ရေ မြေလေ မီး ဓါတ်ကြီးလေးပါး အစုအဝေးသာဖြစ်သည့်လူသားစင်စစ်တည်း တဲ့ သွေးလေဖေါက်ပြန်ရင် ကိုယ်လက်မအီသာတာ ဘာညာ ဖြစ်မှာဘဲလို့ ဆိုလိုတာ။ ဘုရားရှင် ဝမ်းတော်လားတဲ့အခါ ဝမ်းချုပ်တော်မူတဲ့အခါ စသည်တို့မှာ သမားတော် ဇီဝက သာ ကုစားရပါတယ်။
ဒေဝဒတ် က တောင်စောင်းကနေ ကျောက်မောင်းဆင် လှိမ့်ချတုံးက ခြေမတော် ထိခိုက်ပါတယ်။ ဇီဝက ကုသရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ သမားတော် ဇီဝက ရယ်လို့ ရာဇဂြိုလ် ဝေသာလီ သာဝတ္ထိ စသည် ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိခဲ့ ကာလ တလျှောက်လုံး ရှမ်းရှမ်းတောက် နာမည်ကြီးခဲ့တာလုိ့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဇာတသတ်မင်းသားကို ဘုရားရှင့်ကျောင်းတော်ကို သွားတရားနာဖို့ လမ်းညွှန်ခဲ့တာလဲ သမားတော် ဆရာ ဇီဝက ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဇီဝကရဲ့ အကြံဉာဏ်ကိုယူလို့ အဇာတသတ်မင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားရှင်က အမြတ်ဆုံး အနေနဲ့ ဧတဒဂ်ဘွဲ့တံဆိပ်တွေပေးတဲ့အထဲမှာ ဇီဝကလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ‘ပုဂ္ဂလ ပသန္န’ ဧတဒဂ် ဘွဲ့ကို ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကြည်ညိုတတ်သောအရာ၌ ဘွဲ့တံဆိပ်ရလေသည်၊ သီလ သမာဓိ ပညာစသော ဂုဏ်ကျေးဇူး အထူးရှိသောရဟန်းကို ဂုဏ်ကျေးဇူးအလျောက် အထူးတလည် ကြည်ညိုမြတ်နိုးတတ်သောကြောင့် ‘ပုဂ္ဂလ ပသန္န’ ဘွဲ့တံဆိပ်ရသည်ဟူ၏။) လူသားတို့၏ အကျိုးစည်းပွားကို ဆောင်ရင်း နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆရာဇီဝက ဟာ နိဗ္ဗာန်ဝင် စံပျော်သွားခဲ့ပါတယ် သမီးရေ..။
စာအုပျပေါငျး ၃၈သနျးကြျော စုဆောငျးထားတဲ့ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး စာကွညျ့တိုကျကွီး
ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးက တိုကျခိုကျ နှဈမွုပျခံခဲ့ရသော နယျသာလနျ နာမညျကြျော စဈသင်ျဘော ၃စီး